I-TROPICAL COTTAGE kufutshane ne-AIRPORT - I-Airbnb
I-TROPICAL COTTAGE kufutshane ne-AIRPORT
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguAli
Talofa! IGecko Cottage yindlela egqibeleleyo yokonwabela esi siqithi sishushu, kodwa inabo bonke ubumfihlo, ukuzola kunye nobutofotofo bekhaya-ibhedi enkulu, iA/C, intambo, iWiFi, imicrowave, ifriji kunye neshawari yamanzi ashushu. Ilungele iindwendwe ezi-1-2 kunye nokuhamba nje okufutshane ukuya ebhasini kunye nokuqhuba okufutshane kwisikhululo seenqwelomoya kunye namashishini amaninzi.
Nokuba ulapha ukuze ufumane iparadesi yokuntywila kunye nokuntywila okanye umsebenzi okanye zombini, le ndawo yokubalekela yaseTropiki ilungele wena kuba ibucala, ingasese, izolile, ukanti ikufutshane ngokwaneleyo ukuba uhambe iiyadi ezingamakhulu ambalwa ukuya kumgca webhasi kunye nohambo olufutshane ukusuka. kwisikhululo seenqwelomoya. Inazo zonke izinto eziyimfuneko kunye neentuthuzelo ozidingayo ukuze ukonwabele ngokupheleleyo ixesha lakho apha kwesi siqithi sishushu.
Yindawo epholileyo, eyinyani kwilali ehlala esiqithini apho i-Umu kukas yesiNtu (iionti zangaphandle) zisetyenziselwa ukulungiselela isidlo sangeCawe esicokisekileyo (to'ona'i) kwaye ivumba elimnandi lizalisa umoya wasekuseni. Abahlali belali bahamba behla ngendlela rhoqo benxibe isinxibo sasesiqithini kwaye bawangawangisa kwaye bancume njengoko bedlula. Amahlamvu amaninzi emithi yeziqhamo anika imvelaphi eluhlaza kumakhaya kwaye kuthetha ukuba iziqhamo zifumaneka lula kumntu wonke.
Ndiyakuthanda ukwazi iindwendwe kwaye ndibancede ngayo nayiphi na imibuzo abanokuba nayo malunga nelali kunye nesiqithi. Ndingafumaneka nge-imeyile okanye ngokubhaliweyo ngokufanelekileyo.